तपाईको आज मंगलबारको राशिफल भन्छ-आज यी पाँच राशिकाले दिनुपर्नेछ विशेष ध्यान ! « Sansar News
तपाईको आज मंगलबारको राशिफल भन्छ-आज यी पाँच राशिकाले दिनुपर्नेछ विशेष ध्यान !
७ मंसिर २०७८, मंगलवार ०७:४६
दैनिक आवश्यकता पूरा हुनेछन् भने मिहिनेतको फल प्राप्त हुनेछ। आम्दानी बढ्नाले उत्साह जाग्नेछ। श्रमको उचित मूल्य पाइनेछ। व्यापारमा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ। छोटो समयमै राम्रो उपलब्धि हातलागी हुनेछ। रोकिएको काम बन्नेछ भने जिम्मेवारी समेत बढ्न सक्छ। दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ भने आर्थिक साझेदारीबाट राम्रो लाभ मिल्नेछ।
२०७८ मंसिर ७ गते, मंगलवार, (२३ नोभेम्बर २०२१)
तपाईको आज बुधवारको राशिफल, हेर्नुहोस् आज कुन-कुन राशिकालाई…